ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित दुई विद्यालयमा चोरी – ebaglung.com
२०७४ भाद्र १९, सोमबार २०:००	Top News, थप समाचार
सुमन सुनार, बुर्तिवाङ २०७४ भदौ १९ । ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ४ स्थीत दुई विद्यालयमा चोरी भएको छ । वडाको छोरेगाँउ स्थित छोरेगाँउ माध्यमिक विद्यालय र सोरबाङ स्थित सोरबाङ प्राथमिक विद्यालयमा श्रृंखलाबद्ध रुपमा चोरी भएको छ ।
छोरेगाँउ माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालयको ताला तोडफोड गरि विद्यालयमा रहेको २ थान भलिवल लगायत अन्य समाग्री चोरी भएको विद्यालयका शिक्षक जितेन्द्र विश्वकर्माले बताए । शिक्षक विश्वकर्माका अनुसार आईतबार राती विद्यालयमा चारी भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
आईतबार विहान विद्यालयमा पुग्दा विद्यालयको ताला तोडफोड गरेको अवस्थामा पाईएको विद्यालयले जनाएको छ । चोरी भएको थाहा पाए पछि प्रहरीलाई खवर गरिएको थियो । खवर गरे लगत्तै बोंगादोभान प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली घटनाको अनुसन्धानका लागी त्यहाँ पुगेको थियो । विद्यालय तोडफोड गरि चोरी गर्नेको पहिचान भने हुन सकेको छैन । चोरीमा संलग्नहरुको खाजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उता सोरबाङ स्थित सोरबाङ प्राथमिक विद्यालयको महत्वपुर्ण कागजात सहित अन्य सामाग्रीहरु चोरी भएको विद्यालयले जनाएको छ ।
विद्यालय छाएको ढुंगा निकाली छानो प्वाल पारी विद्यालयका महत्वपुर्ण कागजात सहित बल, मोबाईल चार्जर लगायतका अन्य सामाग्रीहरु चोरी भएको विद्यालयका शिक्षक दुर्जन साप्कोटाले बताए । गत शनिवार र आईतबार विद्यालय बन्द भएकाले २ दिनको अन्तरालमा कुन दिन चोरी भयो भन्ने यकिन गर्न नसकिएको शिक्षक साप्कोटाको भनाई रहेको छ ।
दुई दिनको विदा पछि आज विद्यालय सञ्चालनका लागी विद्यालय पुग्दा छानो बाट चोर पसि दाराजको ताला तोडफोड गरेको पाईएको शिक्षकहरुले बताएका छन् । विद्यालय तोडफोड गरि चोरी गर्नेको पहिचान भने हुन सकेको छैन । घटनाको थप अनुसन्धानका लागी प्रहरीलाई खवर गर्ने तयारी भैरहेको स्थानिय हर्मेलले बताए । विद्यालय बन्दभएको मौका पारि दुई वटै विद्यालयमा एकै रात योजनाबद्ध रुपमा चोरी गरिएको हुन सक्ने स्थानियले आशंका गरेका छन् ।